Turjumidda - Word Foundation • Horudhacidda Fikirka iyo Dareenka
Tarjumida tooska ah
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino turjumaad otomaatig ah ee dhammaan waxyaabaha HTML ka kooban websaydhkeenna. Tarjumaadaha waxaa sameeya kumbuyuutar waxaana lagu heli karaa luqadaha 100. Taas macnaheedu waa in dhammaan howlaha Harold W. Percival ay hadda aqrin karaan inta badan dadka dunida ku nool afkooda hooyo. Noocyada PDF ee buugaagta 'Percival' iyo qoraalladiisi kale waxay ku sii jiraanyaan Ingiriis. Faylashaani waa soo celinta shaqooyinka asalka ah, saxnaantan noocan ah looma filayo turjumaad toos ah.
Qeybta hoose ee midigta bog kasta, waxaa jira xulasho luqadeed oo kuu oggolaanaya inaad u tarjunto bogga luqadda aad doorato:
Adigoo gujinaya xulashada, waxaad dooran kartaa luqadda aad rabto inaad aqriso.
Waxaan sidoo kale ku soo bandhigeynaa Hordhaca Fikirka iyo Dareenka dhowr luqadood oo tabaruceyaashu u yimaadeen inay abuuraan. Waxay ku hoos qoran yihiin xarfaha alifbeetada.
Cutubkan koowaad wuxuu soo bandhigayaa qaar ka mid ah maaddooyinka buugga laga hadlay. Waxay u siisaa akhristaha hal mar macnaha guud iyo gunta buugga oo dhan. Sababtaas awgeed, waxaan bixinnaa tarjumaado tayo-bini-aadam ah oo Hordhac ah markaan kari karno. Waxaan aad ugu faraxsanahay mutadawiciinta ka caawiyay The Foundation Foundation inay tarjumaadaha cutubkan koowaad helaan. Fadlan nala soo xiriir haddii aad rabto inaad gacan ka geysato tarjumaadda Hordhaca luqado kale.
Deutsch: Einleitung von Denken und Bestimmung (Jarmal: Hordhac ilaa Fikirka iyo Dareenka)
Esperanto: Enkonduko al Pensado kaj Destinado (Esperanto: Horudhac Fikirka iyo Dareenka)
Nederlands: Inleiding tot Denken en Bestemming (Dutch: Horudhac Fikirka iyo Dareenka)
Русский: Введение в Мышление и судьба (Ruushka: Horudhac Fikirka iyo Dareenka)
Hordhac ahaan Ingiriis
Inta badan maadooyinka waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh. Qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa in ay bilaabaan. Waxaad arki kartaa in dhammaantood ay ku dhiirigeliyaan tixgelinta fikirka ah. HW Isboortiga